पेरेज-रिभर्टेका सर्वश्रेष्ठ पुस्तकहरू, निश्चित चयन वर्तमान साहित्य
कप्तान एलाट्रिस्टे यो कुनै श doubt्का बिना, पेरेज-रिभर्टेको सर्वश्रेष्ठ पुस्तकहरूमध्ये एक हो। यो उपन्यासको उनीहरुको विस्तृत भण्डारलाई e० भन्दा बढी प्रतिलिपि बनाउँदछ र दर्जनौं भाषाहरूमा अनुवाद गरीएको छ। पठन सार्वजनिक र आलोचकहरूमा यी कार्यहरूको प्रभावले लेखकलाई "सर्वश्रेष्ठ विक्रेता" सूचीमा पर्दछ। यसका अतिरिक्त उनका धेरै कामहरू सफलतापूर्वक फिल्म र टेलिभिजन दुबैका लागि अनुकूलित भएका छन्।
पेरेज-रिभर्टे एक स्पेनिश लेखक र पत्रकार हो जसले उनको प्रशस्त र निर्दोष क्यारियरको लागि उच्च मान्यता प्राप्त छ। वर्तमानमा यो विशेष रूपमा ऐतिहासिक उपन्यासको लागि मात्र साहित्यको लागि समर्पित छ। उनको कामले उनलाई पर्याप्त संख्यामा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार र मान्यताहरू जित्न अनुमति दिएको छ, जसको मतलब हो कि ऊ ध्यान नराखी जान सक्दैन।
1 Pérez-Reverte को जीवनी
1.1 पेरेज-रिभर्टे, पत्रकार
1.2 पेरेज-रिभर्टे र साहित्य
2 पेरेज-रिभर्टे द्वारा सागास
2.1 कप्तान एलाट्रिस्टा सागा
2.2 Falcó त्रिकोण
3 Pérez-Reverte पुस्तकहरु
3.1 कप्तान एलाट्रिस्टे (१ 1996 XNUMX))
3.2 दक्षिणको रानी (२००२)
3.3 Falcó (२०१ 2016)
3.4 साइक्लोप्स गुफा (२०२०)
4 पेरेज-रिभर्टे द्वारा अन्य पुस्तकहरू
Pérez-Reverte को जीवनी
आर्टुरो पेरेज-रिभर्टे गुटियरेजको जन्म नोभेम्बर २ 25, १ 1951 .१ मा स्पेनमा मुर्सिया क्षेत्रको एक स्वायत्त शहर कार्टाजेनामा भएको थियो। उनले म्याड्रिडको कम्प्लेन्टेन्स युनिभर्सिटीमा व्यावसायिक अध्ययन गरे। त्यहाँ, उनले पहिलो years बर्षमा एकसाथ दुई क्यारियर विकास गरेका थिए: पत्रकारिता र राजनीति विज्ञान। यद्यपि उनी अन्ततः पूर्व तिर झुकिए, यसैले पत्रकारिता स्नातक भए।
उनले १ 21 1973 to देखि १ 1994 12 from सम्म लगातार २१ बर्ष रिपोर्टरको रूपमा आफ्नो करियर प्रयोग गरे। अखबारमा १२ बर्षसम्म प्युब्लो र पछिल्लो9बर्षमा TVE सशस्त्र संघर्ष मा एक विशेषज्ञ को रूप मा। आफ्नो पत्रकार जीवनमा उनले विश्वभरि ठूला झगडा ढाकेका थिए, जस मध्ये हामी उल्लेख गर्न सक्छौं:
साथै, सन् १ 91 १ बाट उनले प्रसिद्ध राय लेखहरू बनाए XLweekly (भोन्टो समूह एनेक्स) त्यस्तै गरी, १ 1990 XNUMX ० मा पेरेज-रिभर्टेको रेडियोमा कार्यक्रम रहेको थियो सडक कानून de RNE (स्पेनिश नेशनल रेडियो) मा आफ्नो क्यारियर अन्त्य TVE, कार्यक्रम को होस्ट थियो कोड एक, जसको विषयवस्तु कालो क्रानिकल थियो.
पेरेज-रिभर्टे र साहित्य
पेरेज-रिभर्टे १ 1986 XNUMX मा प्रकाशन गरेपछि साहित्यमा घुसे हुसार, उनको पहिलो पुस्तक, १ th औं शताब्दीमा सेट गरियो। दुई वर्ष पछि उनले काम प्रस्तुत गरे फेंसिंग मास्टर, म्याड्रिडमा विकसित। यी कार्यहरूको वजनको बाबजुद, सुरुआत पछि लेखक चिन्न सुरु भयो फ्लान्डर्स तालिका (1990) र डुमास क्लब (1993)।
पत्रकारिताबाट सेवानिवृत्त भएपछि (१ 1994 XNUMX in मा) पेरेज-रिभर्टेले आफूलाई पूर्ण रूपमा साहित्यमा समर्पित गरे जसले उनलाई महान उपन्यासहरू सिर्जना गर्न प्रेरित गरे। यसले पुस्तकहरूको सेट समावेश गर्दछ कि साहसिक कार्य गर्दछ कप्तान एलाट्रिस्टे, र त्यो १ 1996 XNUMX। सम्म देखा पर्‍यो। यो भन्न सकिन्छ कि यो गाथाले लेखकलाई अन्तर्राष्ट्रिय सफलता प्रदान गर्‍यो, जुन 40० भन्दा बढी देशहरूमा प्रकाशित भैसकेको छ।
२०० 2003 देखि पेरेज-रिभर्टे रोयल स्पेनिश एकेडेमीका प्रबुद्ध सदस्यहरूको सदस्य बनेका छन् र उनले टी चेयर ओगटेका थिए। २०१ 2016 मा उनले पुस्तक साइट स्थापना गरे जेन्डाजसमध्ये उनी मुख्य सम्पादक पनि हुन्। त्यहि वर्षमा उनले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो हिट फिल्म लोरेन्जो फाल्सी ट्रायलॉजी पनि जारी गरे। यस गत वर्षमा लेखकले आफ्ना दुई पुस्तकहरू प्रस्तुत गरे: फायर लाइन y चक्रवातको गुफा.
पेरेज-रिभर्टे द्वारा सागास
लेखक पेरेज-रिभर्टेको आफ्नो रिपोर्टमा महत्वपूर्ण र मान्यता प्राप्त उपन्यासहरू छन्, र ती दुई दुई उत्कृष्ट पात्रहरू अलग छन्: एलाट्रिस्टे र फाल्सी। दुबै पुस्तकहरूमा दुबै स्टार जुन उनीहरूको पहिलो संस्करणमा यत्तिको सफल थिए कि उनीहरूले उनीहरूका कथाहरूको निरन्तरता पाएका थिए। त्यहाँबाट निम्न सागाहरू जन्मे:
कप्तान एलाट्रिस्टा सागा
एलाट्रिस्टेको पुस्तक संग्रह १ 19967in मा शुरू भयो र nove उपन्यासहरूले बनेको छ। यी संग सुरू राजधानी एलाट्रिस्टे, पेरेज-रिभर्टे र उनकी छोरी कार्लोटा पेरेज-रिभर्टे द्वारा तैयार। बाँकी कामहरू लेखकले मात्र जारी राखेका थिए। तिनीहरू डिएगो एलाट्रिस्ट र फ्लान्डर तेस्रोको एक सेवानिवृत्त सैनिक टेनोरियोको कथामा आधारित छन्।
पुस्तकहरू कार्यसहित भरिएका छन्, क्याप्टेनले १ Mad औं शताब्दीको समयमा म्याड्रिडमा एक तरवार खेलाडीको रूपमा रोमांचक कार्यलाई वर्णन गर्दै। यो कम्पेन्डियमको अर्थ पेरेज-रिभर्टेको अघि र पछिको हो, जुन यसमा परिलक्षित हुन्छ विश्वव्यापी मिलियन बिक्री. थप रूपमा, त्यहाँ कामका थुप्रै अनुकूलनहरू पनि भएका छन्, दुबै चलचित्र, टेलिभिजन, कमिकहरू, र भूमिका खेल्ने खेलमा। २०१ 2016 मा, लेखकले सबै कार्यहरूको संकलन गरे, जुन उनले भने: सबै एलाट्रिस्टे। संग्रह बनाउने पुस्तकहरू हुन्:
कप्तान एलाट्रिस्टे (1996)
रगत सफा (1997)
Breda को सूर्य (1998)
राजाको सुन (2000)
पहेंलो डबलमा नाइट (2003)
कोर्ससेयर बढाउँदै (2006)
२०१ 2016 मा, पेरेज-रिभर्टेले लोरेन्जो फाल्का अभिनित तीन उपन्यासहरूको श्रृंखला सुरू गर्दछ। तिनीहरू रहस्य, हिंसा, उत्कटता र वफादारीले पूर्ण काम गर्दछन् जुन तिनीहरूको नायक एक जासूस र हतियार तस्करको रूपमा बिना संयम। कथाहरूको विकास युरोपमा हुन्छ, १ 1936 .1937 र १ XNUMX .XNUMX, गृहयुद्धको समयमा। साहसिक चाँडै पाठक समात्छ र उसलाई प्रत्येक कार्यको भावना महसुस गर्न को लागी।
फाल्कासँग दुई महिला र एक मानिस, भाइ मोन्टेरोस र इभा रेन्गल छन्; यिनीहरू उसका साथी हुन्, र एकै साथ यसका शिकार भए। शृ्खलामा ठूलो यात्राहरू छन्, षड्यन्त्रहरूले भरिएको, जहाँ तपाईं मुख्य पात्रहरूको निरन्तर टकराव देख्न सक्नुहुन्छ उनीहरूलाई के चाहिन्छ भनेर।। नायक को चरित्र को रूप मा दर्शाईएको छ किनकि उसको उद्देश्यहरु हासिल गर्न मद्दत गर्न सक्ने धेरै संख्यामा गुणहरु भए पनि, उनले ती कार्यहरू गर्न अपारंपरिक विधिहरू प्रयोग गर्छन्। पेरेज-रिभर्टे द्वारा प्रयोग गरिएको सूत्रले उनलाई उत्कृष्ट समीक्षा र लाखौं पाठकहरू कमाएको छ।
फाल्को त्रिकोण बाट बनेको छ:
स्पेनी अक्षरहरूको संसारमा हुन सक्ने एउटा उत्तम कुरा पेरेज-रिभर्टेले आफूलाई पूर्ण रूपमा साहित्यमा समर्पित गर्ने निर्णय गरे। निस्सन्देह, उनको कलमले कास्टिलियन पुस्तकालयको कार्यहरूको ग्यालेरीलाई पर्याप्त मात्रामा समृद्ध बनाएको छ। लेखकका सबैभन्दा उल्लेखनीय उपन्यासहरू हुन्:
यो ऐतिहासिक कथा साहित्यले जोरदार तरवार चलाउने र सेवानिवृत्त युद्ध सिपाहीको रोमांचको बयान गर्दछ: डिएगो एलाट्रिस्टेट र टेनोरियो। कथा १ seven औं शताब्दीको म्याड्रिडमा भ्रष्ट र घट्दो स्पेनमा सेट गरिएको छ। कथा फ्लान्डर्स तेस्रोमा कप्तानको पूर्व युद्ध साझेदारको छोरो आईइगो बाल्बोआले कथन गरेको छ।
प्लॉट जेलमा डिएगो एलाट्रिस्टेबाट शुरू हुन्छ, किनकि उसले आफ्नो कर payण तिर्न सकेन। जेलबाट छुटे पछि, एलाट्रिस्टको यात्रा सुरु हुन्छ। ती मध्ये, रातको अन्धकारमा स्टिल फ्ल्याशिंगको साथ युद्धहरू मुख्य पात्रहरू हुन्। गुल्टेरियो मालाटेस्टा -शब्द र हत्यारा—, फर्नांडो डे क्वेदो-स्पेट र एलाट्रिस्टेका मित्र र फ्रे एमेलियो बोकेनेग्रा - क्रूर अन्वेषक - यी पात्रहरू मात्र हुन् जसले यी पृष्ठहरूलाई जीवन दिन्छन्।
कप्तान एलाट्रिस् ...
दक्षिणको रानी (2002)
यस उपन्यासले टेरेसा मेंडोजा चाभेज (उर्फ ला मेजिकाना) सिनालोआ (मेक्सिको )की युवतीको जीवनमा केन्द्रित छ। उनको प्रेमीको मृत्यु पछि "एल गोरो" - ज्वारेज कार्टेलि टेरीसासँग नजिकको सम्बन्ध राख्ने उड्डयन पाइलट स्पेनमा यात्रा गर्न बाध्य छिन्, जहाँ उनको नयाँ सुरुवात हुने छ, तर लागुपदार्थको तस्करको रूपमा।
कथानक मेक्सिको, स्पेन र जिब्राल्टरको स्ट्रेटको सेटिंग्स बीच ठाउँ लिन्छ। त्यहाँ, टेरेसा आफैलाई धोखा, प्रेम, महत्वाकांक्षा र लोभ द्वारा विशेषता एक व्यवसाय मा थोप्न को लागी कोशिश गर्दछ। धेरैले तर्क गर्छन् कि यो वास्तविक घटनाहरूमा आधारित छ, यद्यपि पेरेज-रिभर्टे जिद्दी गर्दछन् कि यो काल्पनिक कथा हो। यो उपन्यास २०११ मा टेलिभिजनका लागि अनुकूलित गरिएको थियो र टेलिमुन्डो च्यानलमा प्रसारित भयो। यो ध्यान दिनुहोस् कि लेखक अनुकूलन मनपर्दैन।
दक्षिणको रानी (सर्वश्रेष्ठ ...
फल्पो ट्रायलजीको पहिलो पुस्तक, फिक्शन-ऐतिहासिक विधाको, जासूसी विशेषज्ञ र बुद्धिमत्ता एजेन्ट: लोरेन्जो फाल्सीको कारवाही शुरू हुन्छ। कथाले पाठकलाई स्पेनिश गृहयुद्धको बीचमा राख्छ, भ्रष्टाचारले चिह्नित वातावरणमा र जहाँ भाडामा लिनेहरूलाई उत्तम भुक्तानी गरिन्छ।
फाल्कालाई एलिसेन्ट जेलबाट घुसपैठ र महत्वपूर्ण क्रान्तिकारीको उद्धार गर्ने जिम्मा दिइयो। यो एक व्यावहारिक आत्मघाती अभियान हो कि स्पेनी ईतिहासको पाठलाई बदल्न सक्छ। भाइ मोन्टेरो र इभा रेन्जेल नायकको साथमा सस्पेन्स, एक्शन, विश्वासघात र अभिलाषाले भरिएको वातावरणमा जिम्मेवार छन्।
Falcó (Falcó श्रृंखला)
चक्रवातको गुफा (2020)
यो पेरेज-रिभर्टेको अन्तिम पुस्तकहरू मध्ये एक हो, जसमा २०१० पछि ट्विटरमा 45.000 2010,००० भन्दा बढी सन्देशहरू संकलित गरीएको छ - एक नेटवर्क जसलाई लेखकले "साइक्लोपको गुफा" बोलाउँदछन् (र तपाइँले पहिले नै थाहा पाउनु भएको छ कि नाम कहाँ हो)। कार्यले १० बर्षका छोटो तर मूल्यवान विचारहरू समावेश गर्दछ, प्राय: साहित्यबाट। उनका लाइनहरू तथाकथित लोला बारमा पुन: बनाउँदछन्, एक भर्चुअल स्थान जहाँ लेखक आफ्ना अनुयायीहरूलाई भेट्छन् र बहुमूल्य कुराकानीहरूको लागि मार्ग दिन्छ।
रुचि राख्नेहरूका लागि, चक्रवातको गुफा ढाँचामा उपलब्ध छ ईबुक।
साइक्लोप गुफा: ...
पेरेज-रिभर्टे द्वारा अन्य पुस्तकहरू
फेंसिंग मास्टर (1988)
चीलको छाया (1993)
Comanche क्षेत्र (1994)
सम्मानको कुरा (क्याचिटो) (१ 1995 XNUMX))
छोटो काम (1995)
छाला ड्रम (1995)
गोलाकार पत्र (2000)
अपमान गर्ने मनसायको साथ (2001)
मलाई जिउँदो समात्नुहोस् (2005)
लडाई को चित्रकार (2006)
क्रोधको दिन (2007)
निलो आँखा (२००))
जब हामी भाडामा सम्मान गरिएको थियो (2009)
सानो Hoplite (2010)
जहाजहरू किनारमा हराउँछन् (2011)
पुरानो गार्डको ट्याang्गो (2012)
बिरामी स्नाइपर (२०१ 2013)
कुकुरहरू र बिच्छाहरूका छोराहरू (2014)
राम्रो मान्छे (2015)
गृहयुद्धले जवानलाई भने (2015)
कठिन कुकुरहरु नाच गर्दैनन् (2018)
स्पेनको इतिहास (2019)
रेखा आगोको (२०२०)
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » धेरै » पेरेज-रिभर्टे द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुस्तकहरू